DELL Ultrabook miaraka amin'ny GNU / Linux ho an'ny Developers | Avy amin'ny Linux
Farany, vaovao tsara !. Efa tamin'ny Mey lasa teo DELL dia nanana nanambara ny fanombohana ny tetikasany Sputnik mikendry ny fampiharana andalana solosaina azo entina miaraka amin'ny GNU / Linux ho fenitra, mifantoka amin'ireo mpamorona izay nanangana fanantenana tamin'io fotoana io; Eny, efa zava-misy io ankehitriny io.
Omaly ny noticia en PCWorld, izay nandrakotra ny famotsorana any Etazonia sy Kanada. Ireo fitaovana voalaza, miaraka amin'ny anaran'ny XPS 13 Developer Edition, Izy io dia ultrabook misy efijery 13-inch, processeur i7, RAM 8GB ary kapila 256GB solid state, izay mandeha eny an-tsena miaraka amin'ny vidiny $ 1,549 USD izay misy 1 taona ny fanohanana matihanina ary mampanantena izy ireo fa misy amin'ny hafa tsena amin'ny fiandohan'ny taona manaraka.
Araka ny voalazan'i DELL, ho an'ny fandaminana sy ny fanovana ireo fitaovana ireo dia nojerena ny hevitr'ireo mpanapa-kevitra, izay nahafahan'izy ireo nahatratra vokatra tsara kokoa, mazava ho azy, mba hahatratrarana an'io dia niara-niasa tamin'ny Canonical ihany koa izy ireo ary koa ireo mpamorona hafa.
Raha misy zavatra mamporisika ahy amin'ity vaovao ity dia toa ny zava-drehetra dia manondro fa ny mpamorona loharanom-baovao misokatra dia efa lasa sehatra lehibe ho an'ny lehibe, izay tsara ho antsika rehetra izay mampiasa amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa. an'ny GNU / Linux, na inona na inona distro resahina.
Ka raha tsara fitondran-tena ianao amin'ity taona ity dia azonao atao ny mangataka amin'i Santa ny iray amin'ireto ultrabooks ireto, farafaharatsiny manamarika kopia an'ity lahatsoratra ity aho raha hahamarika izy ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » DELL Ultrabook miaraka amin'ny GNU / Linux ho an'ny Developers
Lafo loatra koa. Fantatro fa maro no maniry ny handefa ahy any amin'ny tsatòka, saingy afaka mahazo MacBook Air kely kokoa ny iray. Tena mahavariana. Tsy misy tsy mahazatra an'i Linus raha mitafy akanjo iray.
Mahatonga ahy ho fako ny manamboatra milina goavambe fa tsy mametraka karatra horonantsary!
Zahao ny famaritana ireo fitaovana ao amin'ny tranokalan DELL, tsy vitako izany na nasiako ny rohy ho azy ireo satria ratsy ny fifandraisako anio ka tsy afaka natao izany. Na izany na tsy izany, matetika ny ultrabooks andian-tsarimihetsika XPS dia manana sary mahafinaritra.
Ho an'ny mpamorona izany, hatreto dia mbola tsy nahita mpamorona mila herin-tsary bebe kokoa aho 😉
Hatreto dia mbola tsy nahita mpamorona mampiasa Ubuntu aho! xD
Betsaka no manao, raha ny marina ny ankamaroan'ny olona fantatro.
Ho an'ny ultrabook dia tsara ny mitondra ny intel hd 4000. Inona koa, ny intel boards no tsara tohana indrindra ao amin'ny linux, misy ny mpamily efa ela talohan'ny nidiran'ny chip tamin'ny tsena Ho fanampin'izany, ireo chip sary ireo dia mandeha tsara mifandraika amin'ny fanjifana, ary Raha tsy te hilalao ianao dia tsy mila bebe kokoa.
Juscelk dia hoy izy:
$ 1,549 USD? Marina ve fa lafo kokoa amin'ny Ubuntu io noho ilay misy Windows?
Mamaly an'i Juscelk
marina tanteraka. Ataoko fa manonitra ireo varotra ambany mety. Ny marina dia, noho io vidiny io dia aleoko mividy azy amin'ny Windows, izay ho mora vidy kokoa, ary avy eo, veloma amin'ny varavarankely.
Raha zavatra toa izany dia mbola tsy "nitelina" an'ity fampielezan-kevitra Dell ity ho an'ny Linux na Ubuntu aho ... mivarotra solosaina Linux izay heverina ho mora vidy nefa tsia, lafo kokoa noho ny Windows izy ireo, izany hoe ... WTF!
Saingy ny windows dia mora ho an'ny rindrambaiko an'ny antoko fahatelo manohana azy, mamaky adobe (flash, mpamaky), oracle (java), avaratra, sns ...
MIlti dia hoy izy:
Ny mifanohitra amin'izay no izy, ny rindrambaiko rehetra dia mampisondrotra ny vidin'ny fitaovana. Tsy omena na tohanana na inona na inona ilay rindrambaiko fa vao maika lafo. Raha ny salanisa dia manodidina ny 10% amin'ny vidin'ny solosaina no mendrika ny fahazoan-dàlan'ny rindrambaiko entiny.
Ny solosaina izay tsy iharan'ny lisansa rindrambaiko dia tokony ho mora vidy kokoa, raha tsy izany dia misy zavatra hafahafa tafiditra ao.
Amin'ireto tranga ireto, ny zavatra heveriko fa tsy tian'izy ireo hitranga dia ny fahitan'ny mpanjifa ny fahasamihafana. Raha toa ka mora kokoa ny solosaina noho ny tsy fananan'i Windows mitondra fitaovana mitovy amin'izany, iza no hividy ilay solosaina amin'ny Windows? Saika tsy misy olona. Tsy liana amin'ity tranga ity i Dell satria na dia tsy manohana ny fivarotana fitaovana amin'ny fomba rehetra aza ireo orinasa rindrambaiko, dia manolotra ny fahazoan-dohany amin'ny vidiny ambany kokoa izy ireo hividianana betsaka. Raha natokana hivarotra fitaovana tsy misy rindrambaiko i Dell, hijanona tsy hanao an'io fihenam-bidy io ireo orinasa ireo, hiakatra ny vidin'ny fahazoan-dàlana, izay midika ny vidin'ny fitaovana mitondra azy ireo na ny marim-bola ambany ho an'ny Dell.
Izay, raha fintinina, dia fisolokiana, mampandoa vola bebe kokoa ry zareo.
Valiny amin'i MIlti
Ho hitantsika eo. Raha misy orinasa toa an'i Norton mandoa vola hiseho amin'ny fametrahana mialoha ny linux miaraka amina X volana fitsarana. Ny vidin'ny solosaina dia azo aondrana mba hifaninana kokoa ary noho izany dia tsara toerana i Norton ho an'ny mpampiasa mividy fahazoan-dàlana avy aminy. Io niitatra tamin'ny fahazoan-dàlana rindrambaiko maromaro io no ahafahana mampihena ny vidiny ary manao izany i Microsoft na dia manana rindrambaiko manokana aza izy io, alefany mialoha ny MS Office, Skype, sns. Ary noho izany dia miorina amin'ny toerana misy tombony azo amin'ny farany izay ahazoana tombony.
Saingy tsy fanohanana na fihenam-bidy izany, ny vidin'ny fitaovana dia miakatra hatrany, fa tsy ny vidin'ny lisansa feno dia ambany kely ianao noho ny habetsaky ny varotra ambony kokoa, saingy tsy midika izany fihenan'ny vidin'ny fitaovana fa ny mifanohitra amin'izay indrindra no izy.
Tsy ireo orinasan-rindrambaiko no mandoa vola raha ampidirina ao anaty ekipa iray, izay aloan'ny mpampiasa hatrany, na dia tsy eken'izy ireo aza ny milaza azy ireo fa mihoa-pefy.
Izy io dia aloan'ny mpampiasa izay manapa-kevitra ny handoa ny fahazoan-dàlana tsy fanombanana, ary miaraka amin'ny vidiny izay ananany, tombony ho azy ireo ny mampiditra ny lozisialy fanombanana, satria mandoa izany amin'ny fomba mahomby amin'ny mpampiasa… tsy izany rehetra izany.
Tsotra be ny valiny.
Ny rindranasa maimaim-poana dia tsy midika hoe maimaim-poana ary raha lafo kokoa noho ny Winbugs dia noho ny fanovana natao mba hifanaraka amin'ny dell, satria tsy ny mpisedra ihany no niasa tamin'io fa koa ny mpiasan'ny dell, izay iasan'izy ireo orinasa lehibe iray ary tsy maintsy andoavany vola ireo mpiasa ireo, ny vola lany ihany no arahin'izy ireo satria ny zavatra ataon'ny orinasa dia lafo kokoa, na tsotra toy inona aza, toy izay mametraka orinasa hafa (flash, adobe, sns.) izay manao izany Ny ankamaroan'ny asa ary mora kokoa ny mandoa azy io raha tsy manao ny tenanao. Miharihary fa miteny eo amin'ny sehatry ny orinasa aho satria amin'ny ambaratonga tsirairay dia mifanohitra amin'izay no izy.
Ireo izay miaraka amin'ny windows dia misy famaritana hafa. Ity dia lafo kokoa satria miaraka amin'ny fitaovana tsara kokoa.
Tsy dia im-betsaka loatra ny rafitra fiasa no mamaritra raha lafo kokoa na mora vidy kokoa ary amin'ny ankapobeny dia lafo kokoa ny solosaina finday miaraka amin'ny Linux noho ny amin'ny Windows, mazava ho azy fa tsy dia hanana olana firy amin'ny Linux ianao. Ataoko fa miakatra ny vidiny satria miakatra ny kalitaon'ny vokatra.
Hatramin'ny maraina dia mitondra andian-tsikera sy fanaratsiana an'i Dell izahay, satria lafo kokoa amin'ny 50 $ ity milina ity amin'ny Ubuntu noho ny W $. Toa mifandraika amin'ny fifanarahana M $ sy Dell izany. Araka ny nolazain'i David avy amin'ny EMSLinux tamiko, ondrilahy 8GB dia be loatra (raha tsy gamer ianao). Manana Dell XPS 15 miaraka amin'ny 6 gig Ram aho ary ho an'ny asa fampandrosoana bebe kokoa, sarotra be amiko ny mihoatra ny fampiasana 3GB. Ny solosaina dia tena lafo. Betsaka ny olona no aleony mitahiry ilay $ 50, mamafa ny W $ ary mametraka eo amboniny ny distro tiany.
Ny olona ao amin'ny DELL dia tsy te hampitaha ny mpanjifa. Tsy azon'izy ireo atao ny mametraka ny toerana misy azy eo anelanelan'ny Windows sy Ubuntu, ny tsy fitoviana amin'ny lanja ho an'ny Cannonical dia tsy mifanaraka amin'izy ireo. Mila GNU / LINUX ve ianao? Vidio izahay ny ULTRA XPS ary manana mpihaino vaovao izahay: Freak Hardocore LinuxSESSUAL!
Ubuntero, izany indrindra no tiako nolazaina tamin'ilay masinina.
i7, 8GB RAM, 256GB SSD… .. ity dia ho an'ny gamer fa tsy developer, indrindra miresaka momba ny OS sy ny habetsaky ny RAM.
tsy gamer, developer matihanina.
Ny mpamorona matihanina ary na dia ny Database Administrator miaraka amin'ny fitaovana toy izany aza dia mety ho ferana.
Ohatra: ny masinina dia core i5 4gb 512 GB an'ny HHDD miaraka amin'ny windows Xp, izy io dia miadana kokoa noho ny i3 fototra misy Windows 7 an'ny ram 4gb.
Fantatro fa samy nanana windows izy ireo fa ny iray XP ary ny iray 7. Ary ny i5 dia tena tsara nilalao? Angamba, saingy elaela akory vao natomboka noho ny habetsaky ny tahirin-kevitra ananany sy ny isa Programs novolavolaina niaraka tamin'ny VB.NET izay tsy zavatra tadidiko fotsiny ny takelaka misy interface toa ny an'ny Microsoft Office 2007 nilanja 1GB nefa tsy nanana nameno ny angona. Miresaka momba ny 2 na 3 taona lasa izay aho dia miharihary fa ny mpamorona vaovao ankehitriny dia mila bebe kokoa fa tsy tokony hilalao. Ary koa ny mpanao mari-trano sy ny injeniera dia lavo miaraka amina masinina misy ondrilahy 8 gb.
Natokana ho an'ny mpamorona sy ho an'ny vahoaka matihanina bebe kokoa miaraka amin'ny vidiny fanondroana ny OJO ”
Ary nanomboka oviana i Ubuntu no distro ho an'ny mpamorona? Azafady noho ny fahaizako miavaka amin'ny fanontaniako, saingy tsy heveriko ho distro ho an'ny mpamorona ny Ubuntu satria i Ubuntu dia mitantana toerana fitahirizan-tsakafara mandritra ny 6 volana.
Midika izany fa raha mpamorona Python sy Ruby na PHP aho ary sendra mivoaka ny kinova vaovao amin'ireto fiteny ireto raha ao amin'ny Ubuntu aho dia mila miandry ny kinovan'ny Ubuntu manaraka mba hankafizako ilay kinova vaovao , raha ao amin'ny Fedora na Arch dia resaka "fanavaozana sudo yum" fotsiny sy voila, dia azonao atao izao ny mampiasa ireo kinova sy fonosana misy ankehitriny.
Izay no ilazako hoe tsy handeha ny Ubuntu ho an'ny mpamorona! ..
Ubuntu dia ho an'ny mpampiasa farany, ilay mpampiasa namana izay mifandray amin'ny Internet dia mihaino mozika ary mijery horonan-tsary ... Raha tena te hivoatra ianao dia tsara kokoa ny mifamadika amin'ny distro somary mavitrika kokoa amin'ny resaka fonosana sy fanavaozana ny fiteny.
Ny antony rehetra eto amin'izao tontolo izao, ny Fedora na ny OpenSUSE ... Indray andro any dia hifampiraharaha amin'ny Arch aho ... Ubuntu dia lavitra eo amin'ny HEVITRA TOKONY ho sehatra fampandrosoana
Andraso ry zalahy…! Ny fahazoana ireo kinova farany dia soso-kevitra, noho izany dia tsy mandeha any ny sary. Ny mpamorona dia tsy voatery hampiasa ny kinova farany azo antoka fa ny mahazatra; Amin'ny tranga Python, Ubuntu 12.10 dia tonga amin'ny alàlan'ny 3.x ary raha ny tena izy, ny fenitra ampiasaina saika hatraiza hatraiza, na dia amin'ny fatorana 2.7 aza; Fedora dia mbola mampiasa 2.7 ary manana kinova 3.x amin'ny toerany, toa an'i Ubuntu ihany.
Raha ny marina dia ho gaga ianao amin'ny isan'ny fonosam-pampandrosoana izay ananan'i Ubuntu sy ny hafa tsy: node.js, CoffeeScript, npm, maro, zavatra maro izay tsy tonga ao an-tsainao akory ...
Arch hampivelatra? Aleo manapaka atody, tena manelingelina sy manavao be loatra, noho izany ny fihazonana tontolo milamina (amin'ny hevitry ny dikanteny) dia tsy mora araka ny inoan'ny sasany.
Tontolo iainana milamina? Ubuntu? Na izany aza, miankina amin'ny kinova izany na amin'ny tranga ahoana, 12.04 tonga lafatra, 11.10 sy 12.10 pfffff, tsy tokony horesahina intsony, avy amin'ny tsy fahombiazan'ny boot voalohany, fa ny tiako holazaina dia hoe aiza no tianao hizorana miaraka amin'ny rafitra, fantatrao hatrany ny orientation an'ny Ubuntu , mpampiasa farany, na dia tsy midika aza fa misy zavatra hafa azo atao, na dia tiako kokoa aza ny miasa "Fedora - CentOS - OpenSUSE" (fizarana izay ampiasako amin'ny fanaraha-maso ny fampiharana: Nagios, Nagvis, PNP, Centeron, Cacti, sns.). vokatra tsara kokoa sy marin-toerana, ireo fotoana vitsivitsy izay nanandrana tamin'ny ubuntu - debian (madio sy mafy) na rafitra hafa mifototra amin'ny .deb, tsy nahomby tanteraka aho.
Ankehitriny, hoy i Nano, amin'ny resaka tsiro, loko.
PS: Arch Tsy mbola nanandrana azy io aho, tsy fantatro raha kamo, fotoana, tahotra, na dia hitako aza fa maro no namaha ny olan'ny Distro-hopping. Someday…
Izy io dia ny 12.04 no kinova miorina amin'ny Ubuntu, ny kinova antonony eo anelanelan'ny LTS dia mety iharan'ny hadisoana satria i Canonical dia mampiditra zavatra andrana maro.
Mivoatra ao amin'ny Fedora aho. Ny fandrosoana amin'ny andohalambo dia mety ho fitsapana mafy, manamafy izany aho xD
Tsia. Ny kinova LTS dia kinova an'ny Ubuntu toy ny hafa, ny fahasamihafana dia mitoetra tsara ao amin'ny fanohanana lava, satria priori izy ireo dia novolavolaina tamin'ny fotoana iray sy ambanin'ny toe-javatra mitovy amin'ny sisa amin'ireo kinova, mba hahafahan'izy ireo manolotra ny voalohany. olana mitovy amin'ny kinova hafa. Rehefa afaka 8, 10, 12 na 24 volana taty aoriana, noho ny fanitsiana natao, tokony ho marin-toerana kokoa izy ireo noho ny kinova antonony, fa tsy inona akory, ny marika LTS dia tsy midika hoe fitoniana voajanahary fa maharitra kokoa ny fotoana hanohanana, noho ny Ny fotoana dia mitaky fanovana bebe kokoa, izay rehefa mandeha ny fotoana dia miteraka kinova Ubuntu azo antoka kokoa.
Diso ianao, ary raha tsy mino an'izany ianao dia vakio amin'ny wiki:
1. mpandala ny nentin-drazana kokoa isika amin'ny fampifangaroana ny fonosana miaraka amin'i Debian, fampifanarahana mandeha ho azy amin'ny fitsapana an'i Debian fa tsy Debian tsy milamina.
2. Manomboka manamafy ny famotsorana aloha isika amin'ny alàlan'ny famerana fatratra ny isan'ny fiasa vaovao. Hisafidy izay endri-javatra fonosinay ao amin'ny famotsorana LTS izahay, mifanohitra amin'ireo izay avelantsika hialokaloka ary ampiasain'ny mpampiasa hisintona sy hampiasainay amin'ny arsiva misaraka.
3. Halaviro araka izay azo atao ny fanovana ara-drafitra, toy ny fanovana ny rindrambaiko mahazatra, ny tetezamita famakiam-boky marobe, na ny fanovana ny sosona rafitra (ohatra: fampidirana KMS na hal → DeviceKit dia tsy fanovana mety amin'ny LTS).
Raha fintinina dia mpandala ny nentin-drazana kokoa izy ireo amin'ireo fonosana aroson'izy ireo, rehefa avy amina kinova tsy LTS mankany amin'ny kinova LTS izy ireo dia mifantoka amin'ny fampiorenana ireo fonosana ary tsy fampidirana endri-javatra vaovao ary hisorohana ny fiovan'ny rafitra raha azo atao.
«12.10 pfffff, tsara kokoa raha tsy hiteny»
Tsara vintana aho tamin'izay, ny mpizara an-trano izay mitantana ny Ubuntu Server 12.10 (ho an'ny mifanentana amin'ny multifunction) hatreto dia tonga lafatra, nanana baoty 2 na telo izy hatramin'ny nanavaozako azy tamin'ny 12.04 LTS ary naharitra 37 andro izany.
Izaho dia asshole: 17, fito ambin'ny folo ambin'ny folo andro amin'ny uptime 😛
Tsy izany, farafaharatsiny mba tsy foana. Ny fampandrosoana dia matetika atao amin'ny endriny manokana, na any python, robina, Java na fiteny hafa. Ary io kinova io dia mazàna iray miaraka amin'ny ambaratongan'ny patch; tsy maintsy misy antony lehibe hampiasana ny kinova farany. Mivoatra amin'ny python aho ary ampiasainay ny kinova izay miaraka amin'ny Debian 6, izay misy amin'ny mpizara famokarana. Ao amin'ny toeram-piasana dia misy kinova maromaro amin'ny Ubuntu sy Debian Testing (arakaraka ny safidin'ny tsirairay), miaraka amin'ny kinova python samy hafa,
fa tsy maintsy ataontsika azo antoka fa miasa miaraka amin'ny Python 2.6 izay ao anatin'ny famokarana.
Marina ny lazainao fa ny fitsapana debian dia tsara kokoa na archlinux no alefa famotsorana. noho izany tsy misy Fedora. XD
Manao ahoana ianao? Mieritreritra aho fa hanana ubuntu amin'ny fifanarahana sasantsasany amin'ny Canonical ianao, tsy fantatro tsara izany.
Ho an'ny ambiny, esory ny ubuntu ary apetraho ny distro tianao
Amin'ny fanehoan-kevitra amin'ny ankapobeny, somary sarotra ny marina, ok lafo io, saingy misy olona tokony hanomboka handika ireo paradigma; na dia tsy mino aza aho fa ho tanteraka izany, tsy maintsy ekeko ...
Misy safidy tena tsara, afaka manolotra fitaovana azo idirana ireo mpanamboatra ary afaka mamorona ny rindrambaiko ho an'ny distro safidiny ny mpanamboatra rehetra, azo antoka ny Ubuntu, angamba afaka manokatra akany ho an'ny orinasa manana andraikitra ambony i Fedora na Suse, fa tsy toa an'i Canonical amin'ny sehatry ny varotra mahazatra.
Raha ny fahitako azy dia mieritreritra aho fa ny orinasa kely dia tokony hanolotra Ultrabooks vidiny ambany kokoa amin'ny karazany isan-karazany, hamorona solosaina findainy avo lenta sy ambany, mifantoka amin'izy ireo ... be loatra Andriamanitra, hany ka afaka manoratra momba izany aho. Ho hitantsika eo izay mivoaka.
Dock dia hoy izy:
Nahenan'izy ireo ihany ny vidiny hatramin'ny $ 1449 araka ny hita eo amin'ny pejy tolotra: http://www.dell.com/us/soho/p/xps-13-linux/pd
Mamaly an'i Dok
Andao hojerentsika, raha tsy hamaly ny hevitra tsirairay avy aho, dia hiezaka hamintina hevitra iray aho:
@DanielC: Raha mijery akaiky ianao, ny configurations miaraka amin'ny Ubuntu sy Windows dia tsy hitovy, Ubuntu dia miaraka amin'ny 8GB RAM ary raha manana olana ianao amin'ny fizahana ny rohy mankany amin'ny vaovao tany PCWorld dia ho hitanao fa io fitomboan'ny Ny RAM dia natao araka ny fangatahan'ny mpandraharaha izay mampiasa ny kitapom-panadinana. Tsy nisy fotoana nilazana fa ireo configurations ireo dia ho an'ny gamer, ary ENY, ny mpandraharaha matihanina dia mila miasa ny fitaovana ary maro amin'izy ireo no ho vonona ny handoa ny vidin'ny fitaovana satria ho azy ireo dia fitaovana iasana fa tsy fialamboly. Ankoatr'izay, misy ny fametrahana base izay mivoaka miaraka amin'ny 4GB ary mora kokoa.
@Mllti: Raha ny marina ilay mpiara-miasa Xykyz dia marina amin'ny zavatra teneniny, mazàna ny tompon'ny rindrambaiko junk rehetra tonga eo am-pametrahana mialoha ny Windows dia manome ny marika hampidirina azy, mariho fa andiany "andrana" daholo izy ireo. zatra ny fampiasan'izy ireo ary avy eo ianao voatery mandoa ny fahazoan-dàlan'ny mpampiasa. Ho fanampin'izay, Microsoft dia voampanga ho nanao fifanarahana miafina amin'ireo marika lehibe izay toa tokony hiditra amin'ny fandoavam-bola avy amin'ny Microsoft hampiasa Windows ka hanimba ny OS hafa, indrisy mbola tsy voaporofo hatramin'izao.
@Xykyz: miombon-kevitra tanteraka amin'ireo soso-kevitrao aho.
@Alf: Raha ny hevitro, ary tombantombana fotsiny io, hita amin'ny olana amin'ny fametrahana ekipa miaraka amin'ny GNU / Linux, DELL dia tsy maintsy nisafidy distro ho azy, na ahoana na ahoana, ny fametrahana ny ekipa ho iray manontolo dia midika ho fiaraha-miasa. ireo antoko, izay samy mila mandray fanapahan-kevitra avy amin'ny fahefana hanatanterahana ilay tanjona naroso. Amin'ny dingana rehetra amin'ity karazana ity dia ilaina ny fikirizana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ary raha ny fahalalako azy dia ny Ubuntu ihany no distro misy an'io fahafaha-manao io, satria manana rafitra fitantanana manana an'io fahaiza-manao io izy, ary ny sisa amin'ireo disto, ho an'ny ny mahazatra, mandray fanapahan-kevitra amin'ny fiaraha-miasa sy amin'ny marimaritra iraisana, izay manemotra azy ireo. Heveriko fa izany no lakilen'ny Ubuntu no voafidy distro, na dia tsy manilika ny mety hisian'ny karazana fifanarahana hafa eo amin'ny DELL sy Canonical aza aho.
@nano: Manaiky izahay fa tena tsara ho an'ny marika toa an'i DELL ny manomboka manaparitaka paradigma, saingy tsy mino aho fa hiafara amin'ny fanandramana tsy nahomby. Ilaina ny mijery ny antsipiriany iray: ny sehatry ny tsena kendren'ny ekipa resahina, ireo mpandraharaha matihanina, ho hitantsika ny vokatr'izany.
Mikasika ny vidiny, marina fa azo heverina ho ambony izy io, nefa mariho fa ultrabook io, ary tsy fantatro izay fitaovana ato amin'ity sokajy ity izay mora, tsy ireo an'ity marika ity ihany, jereo ao amin'ny HP, Samsung, sns., ary ny tontolo iainana mihetsika ny vidiny dia tena mitovy.
Ankehitriny, misy lafin-javatra iray izay heveriko fa tena manintona indrindra ary ity manaraka ity: avy amin'ireo singa finday lehibe amin'ity fanamboarana ity, ny tiako holazaina dia ny chipset fototra (chipset), fitaovana iray mifanentana tanteraka amin'ny Ubuntu 12.04, izay manana mpamily mifanitsy aminy. , avy eo, avy amin'io fampahalalana fantatra io, tsy dia sarotra ny mahita solosaina hafa mora vidy kokoa amin'ity mpanamboatra iray ity ihany, izay mizara fanamafisam-peo fototra mitovy aminy, miaraka amin'ny antoka azo antoka fa hanohana an'i Ubuntu. 12.04, satria afaka mampiasa mitovy izy ireo mpamily. Raha ny marina, fotoana vitsy lasa izay dia voatery nanao an'io fandinihana io aho mba hisafidianana solosaina finday HP, ho an'ny tetikasa iray mitaky ny fanohanan'ny GNU / Linux ary nataoko izany tamin'ny fanamboarana ny maodely manokana izay nomen'ny mpanamboatra manana mpamily, tratrako ihany niasa tsy nisy olana ilay maodely nofidiko, tsy mitovy amin'ilay "antoka" nataon'ny HP.
Miala tsiny amin'ny bileta, fa niezaka ny hamaly ny ankamaroan'ny fanehoan-kevitra aho rehetra, misaotra betsaka noho ny nijanonanao sy ny hevitrareo satria izy rehetra dia mandray anjara amin'ny fahatakarana tsara ireo olana ireo.
Laptop miaraka amin'ny Linux lafo vidy kokoa noho ny Windows sy amin'ny vidin'ny MacBook
Kitiho ny oronao …… Dell
fmonroy dia hoy izy:
Tsy tiako izany marika izany.
Mamaly an'i fmonroy
Izaho manokana dia tsy dia tiako loatra koa, fa ny momba ny tsirony dia tsy resahina ...
Ny vidiny ihany no tsy tiako indrindra, fa na izany aza, fandraisana andraikitra tsara ho an'ny Source Open: D!
Paulo carmona dia hoy izy:
Antenaina fa io no vavahady ahazoana tombony tsara kokoa ho an'ny tontolon'ny Linux. Azo atao ve ny mividy solosaina finday tsara raha tsy misy OS? Mazava ho azy amin'ny vidiny mendrika.
Mamaly an'i Paulo Carmona
Betsaka ny marika mivarotra modely tsy misy OS nanana Gigabyte q1105m, intel su4100, 4GB ram ary 320GB HDD. 360 $ USD. Nampiasako izany tamin'ny Fedora 15 sy Windows 7. Izaho izao dia manana Asus N53SV, core i5, 8GB ram, GT540m 1GB DDR3, 750GB HDD hybrid.
Tonga ihany koa izy io tsy nisy $ 1000 USD. Ampiasaiko amin'ny Fedora 17 sy windows 7. I Dell koa dia manolotra zavatra mitovy ary bebe kokoa tsy tadidiko.